Ebee Ka Iguzosi Ike n'Ihe Dị? | Martech Zone
Monday, October 31, 2011 Na Mọnde, Nọmba 1, 2011 Douglas Karr
A kọwara iguzosi ike n'ihe dị ka ọ bụ ikwesị ntụkwasị obi nye mmadụ ma ọ bụ ihe ọ bụla. You hụtụla otú Otú ọ dị, a tụlere iguzosi ike n'ihe? Anyị na-ekwu maka otu ahịa na-eguzosi ike n'ihe, olee otu ọrụ na-eguzosi ike n'ihe, olee otu ahịa na-eguzosi ike n'ihe, olee otu ndị ntuli aka na-eguzosi ike n'ihe…
Ọrụ na-ekwu banyere ọrụ iguzosi ike n'ihe, ma mgbe ahụ, ha iku mpụga, adịghị ịzụlite ha nwere ikike esịtidem, ma ọ bụ ka njọ - ha layoff-eguzosi ike n'ihe talent. Gịnị kpatara ya iguzosi ike n'ihe ha naanị na ala ma ọ bụ onye na-ekenye ya?
Ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na-atụ anya iguzosi ike n'ihe votu, ma anyị na-ahọpụta ndị ndu ịtụ vootu na ichezọ ndị ha kwesịrị ịnọchite. Gịnị kpatara ya iguzosi ike n'ihe ha ha otu ukwuu mgbe ahụ ha mejuputara?
Ndị ụlọ ọrụ na-ekwu okwu ezi ndị ahịa, ma ha na-enye ndị ahịa ọhụụ ọhụrụ nlebara anya na azụmahịa dị mma karịa ndị dị ugbu a. Ebee ka ha iguzosi ike n'ihe nye ndị ahịa dị ugbu a? Ahụrụ m vidiyo ahụ n'anya Ally akụ nke ahụ na-ewe ihu ọchị ọchị nnweta
Ya mere, gịnị kpatara anyị ji atụ nrube isi mgbe niile site na ala?
Ọ dị ka mgbe ọ bụla onye ọ bụla n’otu onye ndu na-ekwu maka iguzosi ike n’ihe, ha anaghị ekwu banyere ya iguzosi ike n'ihe ha, ha na-ekwu okwu banyere otu ndị ahịa ma ọ bụ ndị ọrụ na-eguzosi ike n'ihe nye ha. Gịnị mere o ji arụ ọrụ otu ahụ? Echeghị m na o kwesịrị.
Iguzosi ike n’ihe dị m mkpa. Mgbe mmadụ lere m anya n’ihu ma ha kwee m n’aka, ana m eji ya akpọrọ ihe karịa akwụkwọ iwu ma ọ bụ mbinye aka ọ bụla. Mgbe mmadụ gbara ya, dịka onye na-ere ma ọ bụ onye ọlụlụ, enwere m obi ojoo. Ọ bụrụ na ha dị njikere ịhapụ iguzosi ike n'ihe ha, ọ nweghị ihe ha ga-eme maka ego. Aga m apụ n'ụzọ m agaghị azụ ahịa ọzọ na ụlọ ọrụ dị ka.
Naanị nke ahịa Atụrụ m anya na iguzosi ike n'ihe bụ ndị anyị tinyegoro na ha. Ndị ọchụnta ego na-ewepụtakarị ụgwọ ma ọ bụ na-awụli elu maka ụlọ ọrụ ha chọrọ ịzụ ahịa - anyị adịghị iche. Anyị anaghị ewepu ego maka nnweta, mana mgbe mgbe anyị na-eji mmesapụ aka na-enye onyinye maka ụlọ ọrụ na-enweghị nhọrọ ndị ọzọ. Ozugbo ha rutere n'ụkwụ ha, enwere m olile anya na ha ga-enwe ekele maka itinye ego na akụ anyị tinyekwara na ha ga-anọnyere anyị. Eziokwu bụ, anyị anaghị ahụ ya oge niile. Ọ dị ka iguzosi ike n'ihe anwụọla.
Ọ bụrụ na onye ahịa na-akwụ anyị ụgwọ nke ọma iji nweta nsonaazụ ha - ma anyị anaghị - agaghị m atụ anya iguzosi ike n'ihe ọ bụla n'aka onye ahịa ahụ ebe ọ bụ na anyị ejideghị njedebe anyị.
N'eziokwu, echere m na nnọkọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'afọ abụọ gara aga gbasara iguzosi ike n'ihe. Echere m na ọtụtụ ndị mmadụ obi ụtọ imikpu a ego n'ime a ọgaranya mmadụ n'akpa… ma anyị na-atụ anya na ha ga-eguzosi ike n'ihe nye anyị dị ka ọkụ eletrik. Steve Jobs bụ ezigbo ihe atụ nke a. Anyị gbaghaara oke uru na mmepụta nke mmiri maka na anyị, ndị ahịa, lebara anya nke ọma.
You na-enye otu ndị na-eguzosi ike n'ihe nye ndị mmekọ gị na ndị ahịa gị dịka ị tụrụ anya n'aka ndị na-ere gị na ndị ọrụ gị?